Ahaziri Valves, Valves Ngwa, Piping Components - DEYE
API Valves Maka Mmanụ & Gas
API / ANSI Ọnụ ụzọ ámá
API / ANSI Nyochaa Valve
API594 Disc Lelee Valve
API nkwụnye valvụ
Valve Maka Oké Osimiri & Petrochemical
Duplex Igwe anaghị agba nchara valvụ
Alloy Steel valvụ
Valve Maka Ọgwụgwọ Mmiri
Ductile Iron Butterfly valvụ
DLStrainer Na Globle Valve
Air valvụ N'ihi Water
Knife Valve na ndị ọzọ
Valve Ngwa & Pipeline Ngwaahịa
Mkpọchi na Mkpụrụ
Ọnụ ara na njikọ
Nkwonkwo Universal & Rubber Joints
Manhole Cover & Mkpa igbe
Ekwesịrị Butterfly Valves Factor Tour
Ọrụ Agbakwunyere Bara Uru
Mmiri Ọ &ụ &ụ & umbme Plọmba
Ga-ahụ ezigbo Ngwọta ịchọrọ
DEYE piping Industry bụ otu ụlọ ọrụ jikọtara na R & D, n'ichepụta na Marketing na valvụ Industry, anyị na-elekwasị anya na-achọta ngwọta maka piping ulo oru mkpa na-enye ọkachamara ọrụ maka ma n'ozuzu valves na ahaziri valves & valves ngwa, piping mmiri na-agụnye counter flanges, gaskets, bolts na akụ.
Yelọ ọrụ pipeline na Deye guzobere ọhụụ abụọ maka mmepụta valves. DEYE valvụ (Wenzhou) na-elekwasị anya na valvụ API maka Mmanụ & gas, Petrochemical na Mmiri Osimiri. DEYE Valve (Hebei) Lekwasị anya na valves maka ọgwụgwọ mmiri na iji mmiri pọmpụ. Valve maka mmiri ọ Dụrinụ nwere asambodo WRAS akwadoro.
Trunnion nọkwasịrị n'ịnyịnya na bọl valvụ
Full welded lie bọl valvụ
Ugboro abụọ Block na igba obara valves
VALVE IHE PETROLEUM NA HELỌ AHHE ỌRHE
A haziri valvụ API gụnyere ọnụ ụzọ ámá, nlele valvụ, valvụ zuru ụwa ọnụ, valvụ bọl, plọg plọg, bụ nke a na-ejikarị arụ ọrụ na mmanụ ala na ụlọ ọrụ kemịkal.
VALVE maka oru mmiri na ọrụ ụlọ ọrụ
High mgbochi corrosion ihe valves agụnye ọnụ ụzọ ámá valves, ego valves, zuru ụwa ọnụ valves, bọl valves, Butterfly valves ect, na-bụ-eji na mmiri mmiri oru ngo na offshore ụlọ ọrụ.
VALVE maka ị DRụ mmiri na mgbapụta
Achọghị ọnụ ụzọ ámá valvụ, nlele valvụ, Butterfly valves, ikuku valvụ ect, na-ejikarị na-a drinkingụ obere mmiri Water project na WRAS mma ihe.
nnukwu size Double Doubleent valves maka Civil Water oru ngo
Anyị na-enye valvụ urukurubụba eccentric abụọ na DN150-2500 ezubere na anwụ ngwa ngwa na mgbado. Ihe a na-atụgharị anya na nke siri ike, ihe mkpuchi kachasị mma na njedebe njedebe nke ọdụdụ bụ atụmatụ niile na-agbaso ụkpụrụ nke API609, BS5155 Obere isi ọnwụ / Kwesịrị ekwesị maka ịgbanye servic ...
13 2020. Og
Mgbapụta Plọ Mgbapụta – JUL. 16, 2020
Ductile iron gate valvụ na Bronze Seat DN1500 with by pass valve Ọrụ nke valvụ uzo nke valvụ ụzọ ámá arụnyere na nnukwu mgbapụta mmiri bụ ikpochapu ma gbakwunye mmiri: 1. Mgbe nnukwu mmiri mgbapụta malitere ịrụ ọrụ, ọ bụrụ na ikuku dị na w ...
Ọnwale ule dị ala dị ala maka vayo cryogentic
Ndụ na-eji ule maka ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ na oche EPM
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ oru ngo na obi, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa.
Adreesị: Nke 368 North Youyi St, Shijiazhuang, Hebei, China